राति यस्ता सपना आयो ? जान्नुहोस् कारण – Jagaran Nepal
राति सुतेपछि हरकोहीलाई सपना आउँछ । कसैले बिहान उठ्दा सपना सम्झिन्छन् भने कसैले बिर्सिन्छन् । तर देख्न चाहिँ सबैले सपना देख्छन् नै ।
किन आउँछ से,क्सी सपना ?
केही मान्छे से,क्सका बारेमा हरदम सोचिरहेका हुन्छन् । से,क्स गर्ने हिम्मत नभएका यस्ता मान्छेले मनमा कुरा दबाएर बसिरहेका हुन्छन् । युवाहरूलाई से,क्सको सपना आउनु आश्चर्यको कुरा हैन तर बुढाबुढीलाई समेत यस्तो सपना आउन सक्छ । से,क्सको सपना उमेर बढ्दै जाँदा झन् झन् आउँछ । अत्यधिक रचनात्मक मान्छेलाई पनि सेक्सको सपना आउँछ ।
पूर्वप्रेमीसँग से,क्स गरेको सपना
तपाईंले नचाहे पनि पूर्वप्रेमी वा प्रेमिकासँग से,क्स गरेको सपना तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रेमीहरू भूपू भएपनि सपनामा त उनीहरू आफ्नै हुन् नि भन्ने सोच व्यक्तिमा निहित हुन्छ । उनीहरूसँगको पुरानो याद अचेतनमा रहिरहेको हुन्छ ।
से,क्स जो वा जेसँग पनि गर्न मन लाग्छ मान्छेलाई । बिजुलीको पोलदेखि सडकको खाल्डोसम्मलाई नछोड्ने मान्छे पनि भेटिन्छन् । कसैकसैलाई जनावरसँग से,क्स गरेको सपना आउन सक्छ । यस्तो सपना आउने मान्छे आफूमा मानसिक समस्या छ कि क्या हो भनेर आत्तिन सक्छ । तर मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार दामी से,क्स गर्न मन भएका मान्छेले जनावरसँग से,क्स गरेको सपना देख्छन् ।
हरेक व्यक्तिलाई कोही न कोही प्रसिद्ध कलाकार मन पर्छ नै । अनि उनीहरूसँग से,क्स गरेको सपना पनि आउन सक्छ । यस्ता सपना देख्ने मान्छेका बारेमा मनोवैज्ञानिकहरूको के मत छ भने तिनीहरू जिन्दगीमा केही गर्न चाहँदैनन्, खालि स्वैरकल्पनामा बस्न चाहन्छन् ।
कहिलेकाहीँ हाम्रो सपनामा एलियन आउँछन् र हामी उनीहरूसँग क्रीडा गर्छौं । हैन हामीले के गरेको यो जस्तो पनि लाग्छ । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार सेक्समा रोमाञ्चको चाहना गर्नेहरू यस्तो सपना देख्छन् । सपना जस्तो भएपनि सपना नै हो । तपाईं आफ्नो से,क्स लाइफको आनन्द उठाउनुहुन्छ भने वास्तविक संसारमा आउनुस् । सपनामा मात्र रमाएर के गर्नु ?